विपतले निम्त्याउने क्षति कम गर्न सबै सतर्क हुनुपर्छ | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / विपतले निम्त्याउने क्षति कम गर्न सबै सतर्क हुनुपर्छ
विपतले निम्त्याउने क्षति कम गर्न सबै सतर्क हुनुपर्छ
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता July 4, 2018	0 258 Views
प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा विपत व्यवस्थापन समितिका संयोजक
यसपालिको वर्षायाम शुरु भइसके को छ । लगातार वर्षा हुँदा मानवीय क्षतिका घटना पनि भइरहे का छन् । छिमे की जिल्ला रो ल्पा र बाँके ले मानवीय क्षति व्यहो रे  । कतै पहिरो त कतै डुबानको समस् या छ । दाङमा पनि मुख्यगरी बाढी र डुबानकै समस् या छ । बिते को पाँच वर्षलाई फकेर् र हे नेर् हो भने पनि सुखद छै न । वर्षा शुरु भएको छ । विगत दो हो रिन नदिन पूर्वसतर्कताका काम कति भएका छन् ? यसै सन्दर्भमा दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्लास्तरीय विपत व्यवस्थापन समितिका संयो जक गजे न्द्रबहादुर श्रे ष्ठसँग युगबो धकर्मी जे .एन.सागरले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षे प यहा प्रस्तुत गरिएको छ । – सम्पादक
विपतबाट हुने क्षति रो क्न पूर्वतयारी के गरिएको छ ?
पूर्वतयारी भने को एकै दिनमा हुने हो इन । हामीले मंसिर, पुसदे खि नै डुंगा चलाउने तालिमदे खि लिएर सबै प्रतिकार्यका कामहरु गरिरहे का छौ ं । जे ठमा आएर जिल्ला विपत व्यवस् थापन समितिकै व्यापक छलफलबाट विपत प्रतिकार्य यो जना तयार गरी स्वीकृत गरे र सबै सम्बन्धित स् थानहरुमा पठाइसके का छौ ं । विपतबाट जो गिन के –के गनेर् भन्ने कुरा विस् तृतरुपमा हामीले प्रतिकार्य यो जनामा उल्ले ख गरे का छांै र सो हीअनुसार तयारी पनि गरिएको छ । जस्तो उद्धार सामग्री, दक्ष जनशक्तिलगायतका कुराहरु हामीले एकिन गरे र सो ही अनुसारको यो जना बनाएका छौ ं । त्यो यो जना स् थानीयतहदे खि सबै ठाउमा पठाइएको छ ।
तयारी पर्याप्त छ ?
हामीले विगतको अनुभवलाई समे त हे रे र यो जना बनाएका हौ ं । हामीस“ग भएका साधनहरुको ले खाजो खा गरे रै तयारी गरिएको छ । अहिले त स् थानीय तहसमे तलाई समे टे र कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने समे त हामीले यो जनामा राखे का छौ ं र सो हीअनुसारको काम गर्न सतर्क भएर बसे का छौ ं । सबै भन्दा पहिले त विपत नआओ स भन्ने नै हो  । विपत आएपछि सहयो ग गरौ ंला भन्ने भन्दा पनि नआओ स् भन्ने मा हामी छौ ं र आइहाले सो हीअनुसारको संयन्त्र बनाएर हामी बसे का छौ ं । सो ही अनुसार विपत जो खिमका सूचनाहरु छिन्–छिन्मा अपडे ट गनेर् र सतर्कता अपनाउने काम पनि गरे का छौ ं ।
सहयो गी सामग्री के छन् ?
विपत भन्ने बित्तिकै दाङमा मौ समी समस् या नै हो  । खासगरी त्यसबाट जो गिन र सहजता ल्याउन हामीले हाम्रो सीमासग जो डिएको सल्यानमा पनि त्यो खालको इक्वीपमे न्टहरु तयारी अवस् थामा राखे का छौ ं भने अमे लिया–तुलसीपुर सडकखण्डका लागि पनि त्यो खालको सामग्री तयारी अवस् थामा राखिएको छ भने जहा–जहा आवश्यक पर्छ त्यहा त्यतिबे लै प्रयो ग गर्नका लागि हामीले आवश्यक सामग्री पनि सो ही अनुसारले व्यवस् थापन गरे का छौ ं । तुलसीपुर–लमही सडकका लागि पनि विपतबाट आउनसक्ने समस् याबाट नागरिकलाई उद्धार गनेर् दे खि लिएर थुप्रै समस्याबाट जो गाउने खालका सामग्रीहरु हामीले तयारी अवस् थामा राखे का छौ ं ।
कस्ता सामग्री हुन् तयारीमा राखिएका ?
मै ले माथि पनि भने ं आवश्यक सामग्रीहरु तयारी अवस् थामा राखे का छौ ं । आपतकालीन अवस् था नै आइहाले सुखेर् तबाट हे लिको प्टर ल्याउने व्यवस् थासमे त हामीले गरे का छौ ं । भर्खर मात्रै पाच नम्वर प्रदे शस् तरीय विपत व्यवस् थापन कसरी गनेर् भन्ने विषयमा बुटवलमा छलफल पनि भएको थियो  । सामान्यतया विपतमा परे काहरुको उद्धारका लागि आवश्यक सामग्री तयारी अवस्थामै छन् ।
प्रतिकार्ययो जना बनाएको कुरा गर्नुभयो , जो खिम क्षे त्रको पहिचान पनि गरिएको हो ला नि ?
दाङको कुरा गर्दा चुरे क्षे त्रबाट आउने ठाडा खो लाको पानीको समस् या त एकछिनका लागि मात्रै हो  । सो हीअनुसारको तयारी हामीले गरे का पनि छौ ं । दाङमा खासगरी राप्ती र बबईको समस्या हो  । जो खिमको हिसावले दाङका १० स्थानीय तहमध्ये आठवटा बाढीको दृष्टिले जो खिममा छन् र ती आठवटा स्थानीय तहका ३५ वटा वडा अति जो खिम क्षे त्रमा पर्छन् । सो ही अनुसार हामीले उद्धारका लागि कस् तो सामग्री राख्ने र जनशक्ति राख्ने भन्ने विषय पनि उल्ले ख गरे का छौ ं ।
दाङमा जो खिम भने को डुबानकै हो ला नि ?
हो , दाङको तल्लो तटीय क्षे त्रमा बाढीले क्षति पु¥याइरहे को दे खिन्छ । त्यो भने को डुबानकै समस्या हो  । अरु पनि समस् या छन् । खासगरी अति जो खिममा रहे का ३५ वटा वडाहरुमा यस् तो समस् या छ । त्यसै ले हामीले पनि सो हीअनुसारको तयारी गरे का छौ ं ।
जे गर्दा पनि सरकारको मुख ताक्ने प्रवृत्ति छ, सरकारी यो जना के छ ?
अहिले त तीनवटा सरकार छन् । सो ही अनुसार हामीले स्थानीय र जिल्लामा पनि विपत व्यवस् थापन समिति निर्माण गरे र काम गरिरहे का छौ ं । अहिले त नागरिकस् तरमा पनि यस् ता समिति बनाइएको अवस् था छ । त्यसमा झन हाम्रो ने पाली समाजमा एकले अर्कालाई सहयो ग गनेर् बानी नै पनि छ । यसर्थ सबै चनाखो हुन त पर्छ । तथापि सरकारी संयन्त्र र नागरिक तहमा पनि विपत व्यवस् थापन समितिले काम गरिरहे को अवस् था छ ।
स्थानीयहरु हामी जो खिममा छौ ं भन्ने कुराको जानकारी छ ?
जो खिम क्षे त्रमा छौ ं भन्ने कुराको जानकारी नहुने भन्ने हो इन, जानकारी सबै लाई छ । हामीले पनि भनिरहे का छांै  । स्वयं पनि उनीहरुलाई त्यो समस् याबारे थाहा छ । त्यसै ले पूर्वसतर्कताका लागि हामीले सचे त बनाउने काम पनि गरिरहे का छौ ं । मै ले त के भन्छु भने विपत जानाजान आउदै न । कतिबे ला आउछ भन्ने थाहा नपाए पनि त्यसबाट जो गिने उपायका बारे मा सबै जानकार हुन जरुरी छ । कतिपय स् थानीय तहले त त्यस् ता जो खिममा रहे का नागरिकलाई सुरक्षित ठाउमा आवासको व्यवस् था गर्नुपर्छ भन्ने कुराको अग्रसरता आफै लिएको पाएको छु । तर के ही समस्या पनि छन् । खासगरी लमही नगरपालिकाले सुरक्षित आवास निर्माणको कुरा ल्याएको छ । तर जग्गाको अभाव सिर्जना भएको छ । हामीले पनि स्थानीय तहलाई भने का छांै कि सुरक्षित आवासको नीति लिएर अघि बढ्नुपर्छ । र तत्कालका लागि विपतबाट जो गिन सजग भएर लाग्नुहो ला भन्ने कुरा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सुसूचित गनेर् काम गरे का पनि छांै  ।
विपत न्यूनीकरणका लागि दाङका स्थानीय तह कति गम्भीर छन् ?
यसमा त स् थानीय तहहरु एकदमै चिन्तित छन् । अघि पनि मै ले भने ं लमही र बबईले आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित बनाउनका लागि छुट्टै आवासको व्यवस् था गनेर् तयारी गरिरहनुभएको छ । तथापि कानुनी अड्चन अहिले पनि छन् । त्यसै ले हामी पनि गम्भीर भएर लागे का छौ ं । अघिल्लो वर्ष पनि बाढीको समस् यामा परे का नागरिकलाई उद्धार गनेर् , राहत वितरण गनेर् सवालमा सबै स् थानीय तह गम्भीर भएरै लाग्नुभएको थियो  ।
वर्षायाममा यस्ता समस्या नियमितजस् तै दे खिन्छन् । तर समस्या समाधानमा त को ही लागे को दे खिएन नि ?
त्यसो हो इन । सरकारी निकाय यसतर्फ गम्भीर भएर लागे को पनि छ र आगामी दिनमा पनि यस् ता समस् या आउन नदिने तर्फ गम्भीर भएर लागे को अवस् था छ । समस् या बरु वस् ती स् थानान्तरण गर्न आवश्यक जमिन पाइएको छै न । यसतर्फ सबै गम्भीर भएर लाग्न जरुरी छ । गम्भीरताको कुरा गनेर् हो भने त अघिल्लो वर्ष पनि बाढीको समस् या दे खिएकै हो  । जतिबे ला स् थानीय तहहरुले अग्रसरता दे खाएर आफ्ना नागरिकको सुरक्षाका लागि थुप्रै काम पनि गरे का हुन् ।
गम्भीरता भाषणमा हुने तर व्यवहारमा दे खिएन त ?
मै ले माथि पनि भने ं सुरक्षित आवासको कुरा स्थानीय तहबाटै आएको छ । जमिन उपलव्ध गराउन समस् या हुने कुरा एउटा छ । कतिपय ठाउ“मा त जुन वस् तीका लागि उनीहरुलाई बचाउन लगानी गनेर् हो सो ही लगानीमा वै कल्पिक व्यवस् था गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले लाग्नु पनि भएको छ । तर वन क्षे त्र वा आवश्यक जमिनको अभावमा समस् या टुंगिएको छै न । तथापि सबै तह यसप्रति गम्भीर हुनुपर्छ । अकोर् कुरा वस् ती विकासका लागि पनि आवश्यक नीतिको आवश्यकता पर्छ । त्यसतर्फ मै ले व्यक्तिगतरुपमा सबै स“ग कुरा समे त गरे को छु ।
विपत आइहाले सामग्री र दक्ष जनशक्ति हामीसग पर्याप्त छन्् ?
दक्ष जनशक्ति निर्माणकै लागि हामीले राप्तीमा पुसतिरै ¥याप्टिङ गराउने , डुंगा चलाउन सिकाउने काम गरे का छौ ं । त्यस् तै डुबानमा फसे कालाई कसरी उद्धार गनेर् भन्ने विषयमा प्रशिक्षित गनेर् काम पनि गरे का छौ ं । गाउ–गाउबाट हामीले त्यसरी सिकाएका जनशक्तिले घर–घरमा पनि सिकाएका छन् । र से ना, प्रहरीमा पनि त्यो खालको जनशक्ति राख्ने चलन छ र हामीस“ग पनि छन् । तर उनीहरुलाई सबै ठाउमा परिचालन गर्न सकिदै न । खास–खास तथा अति जो खिम क्षे त्रमा हामीले परिचालन गनेर् गरे का छौ ं ।
जिल्लाबासीलाई भन्न छुटे को के ही ?
पत्रिकामार्फत म सबै लाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो विपत भन्ने कुरा थाहा दिएर आउने कुरा ह“ुदै न । तर जो खिम क्षे त्रका नागरिकहरुले आउछ भन्ने सो चे र सतर्क भएर बस् नुपर्छ । सकभर समस् या नआओ स् आइहाले एकले अर्कालाई सहयो ग गरे र कम्तिमा मान्छे को सुरक्षा गर्नतिर सबै लाग्न जरुरी छ । विपत आउ“दा क्षति धे रै हुनसक्छ । तर मानिसलाई जो गाउने तिर सबै को ध्यान जानु जरुरी छ । कतै आपत विपत परे जिल्ला प्रशासन, प्रमुख जिल्ला अधिकारीका हिसाबले म पनि २४ घण्टा सतर्क भएर बसे को छु । जहा समस्या आउ“छ प्रशासनको सम्पर्कमा रहनुभयो भने सहज हो ला ।
Previous: प्रतिष्ठानको जग्गा खोज्न कार्यदल गठन
Next: उत्ताउलिन विवश : धानदिवस